Piqora: Nchịkọta bara ụba maka Pinterest, Instagram na Tumblr | Martech Zone
Piqora (na mbụ Pinfluencer) bụ ahịa na nchịkọta ikpo okwu maka ihe nlere anya, ntaneti nwere ntaneti dika Pinterest, Tumblr, na Instagram. Sulọ ha gụnyere njikọ aka, hashtag, ntụgharị na usoro ntinye ego. Piqora na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa a ma ama, ndị na-ere akwụkwọ, na ndị na-ebipụta akwụkwọ iji chọpụta ma jikọọ ya na ndị na-akwado akara ngosi dị egwu, nweta nghọta dị omimi banyere ihe onyonyo na-ewu ewu, ma tụọ usoro ntinye aka dị mkpa iji gụpụta njikọ aka na netwọkụ ndị a na-ahụ anya.
Ihe nchoputa nke ihe omuma nke Piqora na - enyere ndi ahia aka ichota onyonyo na - ewu ewu, hashtags, ndi n’eso uzo ya na ndi n’enye oru na netwok anya dika Instagram, Tumblr na Pinterest. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịghọta nchịkọta nke mmekọrịta mmekọrịta, ihe onyonyo na mmasị ndị na-ege ntị ma n'otu oge ahụ nwere ike ịdaba na otu ntanetị wee hụ akụkọ zuru ezu na isiokwu, hashtags, ndị ọrụ na onyonyo.
Ndị mmadụ na-eji hashtags were kọwaa ọdịnaya yana isonye na mkparịta ụka na-eme n'ịntanetị. Na Piqora, ndị na-ere ahịa nwere ikike ịchọpụta hashtags ma chọpụta ndị na-azụ ahịa n'ofe netwọkụ ọhụụ atọ ahụ, bụ ndị kpọtụrụ aha n'ụzọ doro anya otu akara ma ọ bụ isiokwu metụtara ya maka mgbakwunye mgbasa ozi ahịa ezubere iche. Site na Piqora, ndị na - ere ahịa akara nwere ike inyocha otu ma ọ bụ ọtụtụ hashtags ma chọpụta ihe onyonyo dị mkpa na njikọ nke ndị ọrụ gbara gburugburu ụwa.
Piqora na-arụ ọrụ nyiwe ọhụụ ndị a:
Pinterest - Chọpụta ihe ndị na-ewu ewu, njikọ aka, ike iru, iru, ROI, ego ha n ’otu ntụtụ, nleta kwa ntụtụ, ndị na - eso ụzọ, nnabata, mmasị na ọnụego repin. Tulee atụdo, repins, ndị na - eso ụzọ, ịrịa ọrịa, na ọrụ gị na nke asọmpi gị ma soro ndị ọ kachasị nwee mmasi. Hazie, duputa ma soro asọmpi, asọmpi, na nkwalite.
Tumblr - Chọpụta ihe onyonyo a ma ama na ndị na - ekwu maka ụdị akara gị. Sochie ihe oyiyi gị na-eme na ndị na-ege ntị nke na-etinye ọdịnaya saịtị gị. Chọpụta onye na-emegharị, na-achọ, ma na-aza ajụjụ na post gị ma soro ndị ọrụ nwere mmetụta.
Instagram - Sochie profaịlụ nke ika gị na Instagram. Chọpụta foto kacha elu, vidiyo, hashtags na ndị na-eso ụzọ. Chọpụta foto ndị na - agagharị ma hụ ụdị iru ogo gị na nje. Zube ndị ọrụ Instagram ndị na-akwọ ụgbọala mmasị na itinye aka na foto gị. Jiri usoro metrik gị, foto ndị na-ewu ewu, na data ndị na-ege gị ntị tụnyere ndị asọmpi gị. Nyochaa ọdịnaya ha kachasị elu na ndị ọrụ nwere mmetụta.
Piqora nwekwara ihe oru Social CRM zuru ezu maka Tumblr na Instagram nke na-enyocha mkparịta ụka mmekọrịta ọha na eze ma na-enye gị ike ịchọpụta ma mee ihe na ebumnuche ịzụta.
Neti Anya anya buru ibu ma na-eto eto. Pinterest bụ 3rd kasị e-azụmahịa centric elekọta mmadụ na netwọk na ihe karịrị 10 Ijeri atụdo, draịva siri ike zuo okporo ụzọ okporo ụzọ na a Revenue / Visitor nke $ 1.47 na nkezi iji uru nke $ 169. Instagram na aka nke ọzọ bụ a mobile centric foto na hashtag dabeere na-elekọta mmadụ na netwọk na nwere 130+ nde nọ n'ọrụ ọrụ, 16+ ijeri foto uploaded na 1+ ijeri amasị dị ka nke June 2013. Tumblr, a arọ image dabeere Micro ịde blọgụ netwọk bụ ndị kasị ibu. netwọk dabeere na mmasị na 225 + nde ụwa zuru ụwa ọnụ, blọọgụ 118 +, nde 59 + na nde 80 + kwa ụbọchị (dịka nke June 2013).
Tags: -eso ụzọnetwọk oyiyinchịkọta instagramnyocha pinterestpinterest n'ọkwárepinselekọta mmadụ crmnchịkọta tumblrnetwọk anya